တွေးမိတိုင်း ချရေးဖြစ်ခဲ့မိတဲ့ facebook ပေါ်က မိုးည ရဲ. status လေးများစုစည်းမှု ! | PoemsCorner
တွေးမိတိုင်း ချရေးဖြစ်ခဲ့မိတဲ့ facebook ပေါ်က မိုးည ရဲ. status လေးများစုစည်းမှု !
ရက်မသိတဲ့ ဖိတ်စာ … ဘယ်သူကလာဖိတ်ပီး ဘယ်ကိုသွားရမှာလဲ…ဘယ်ခရီးလမ်း နဲ. သွားရမှာလဲ သိခဲ့ရင်ဖြေပေးခဲ့ကြပါ ???
မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ရောက်ကိုရောက်လာမယ့် ဧည့်သည်…မသွားဘဲ နီးနီးလာတဲ့ခရီး…သွားနေပါလျက်နဲ. ဝေးဝေးသွားတဲ့ ပန်းတိုင်!!!
လွန်သာလွန် မကျွံစေနဲ. … အနှုတ်ရခက်လွန်းလို.ပါ !
အစထဲက မှန်အောင်တွေး မှန်တာလုပ်ပီး မှန်တာတွေပြောနေရင်…မိုးမိုး သီချင်းထဲကလို “ငါမှားလား မင်းမှန်လား” လာမေးနေစရာမလိုပါဘူး…မှန်လား မှားလား လောကမှာ အသိဆုံးနှစ်ယောက်ဘဲရှိတယ် …ကာယကံရှင် နဲ. ဘုရားဘဲ…! 🙂
ပျော်အောင်နေနေပါသည်…ထို.ကြောင့် ပျော်နေပါသည်…ရှုပ်စရာအတွေးများ ခဏလောက်စောင့်ပေးကြပါ ။
အရာရာတိုင်းမှာ ရုပ်ဝတ္ထုသိပ်မဆန်ပါနဲ. …တချို.ချို.နေရာမှာတော့ အကျိုးသိပ်ရှိချင်ရှိနိုင်ပေမယ့်…တခုတော့ စိတ်ထဲစွဲထားပေါ့ …ကိုယ်ဖက်တွယ်ထားတဲ့ ရုပ်ဝတ္ထု က Everlasting လား … သေချာရဲ.လား … ခဏလောက်တွေးကြည့်လိုက်ပေါ့ !
မှီခါနီးပီ … မှီခါနီးပီ နဲ. ပြေးလိုက်လာခဲ့တာ … ခုမှဘဲ သိတော့တယ် … ငါ မဟုတ်တဲ့ ငါ့ ရဲ. အရိပ် သပ်သပ်ကြီးဘဲကိုးးးး…
ပိုလည်းမလိုချင်ပါဘူး…လျော့ပီးလည်း မလိုချင်ပါဘူး…ရသင့်တဲ့ ရပိုင်ခွင့် အားလုံးကိုတော့ အပြည့်အ၀ လိုချင်ပါတယ်…ဒါကိုမှ နင်လောဘကြီးလှချည်လားလို. တော့ လာမပြောနဲ. …ငါက ခုမှ နင့်လိုလောဘကြီးတတ်အောင်သင်ယူနေတုန်းဘဲ !
In: Others Posted By: moemyat2thein Date: Oct 22, 2011
စောမေ ၏ ကဗျာများစုစည်းမှု
Facebook ရဲ့ ” မ “